यी ८ गुण भएका युवतीहरु तपाइका लागि योग्य होइनन् - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ साउन २ गते १५:५१
मानिसहरुले आफ्नो विशेष साथी खोजिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गर्छन् । धेरैले त्यही सम्बन्धलाई जीवनको अभिन्न अंगको अवस्थामा बदल्ने गर्छन् । अर्थात् विवाह गरेर युगौँयुग सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वाचामा बाँधिन्छन् । हुन त हर कोहीको जीवनमा कुनै एक समय एक भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ ।
तर हामीलाई अक्सर हामी कस्तो मानिससँग जोडिएका छौँ भन्ने कुराले सताउने गर्छ । किनकी कुनैपनि सम्बन्ध राम्रो हुन दुवैको समान भूमिका र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि एक हातले ताली बज्दैन । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर बनाउने गर्छ । प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक जीवन कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारे पनि खोज अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ मानिसले । एक अर्कालाई पूर्णरुपले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार्नु, साझा लक्ष्य वा स्वार्थ पहिचान गर्नु, थोरै म बद्लिन्छु, थोरै तिमी बद्ल र थोरै सम्झौता गरौँला भन्ने भावनाहरुले सम्बन्धलाई नाटकीय रुपले मजबुत बनाउँछ ।
यद्यपि आजको विषय भनेको अहिले सम्म अक्सर यस्ता युवासँग सम्बन्ध जोड्नुस्, उस्तासँग सम्बन्ध तोड्नुस् जस्ता सुझावका आलेखहरु पढ्ने गरिएको छ । यहाँ केही यस्ता व्यवहारिक विषयहरु छन् जसले तपाइले कस्ता युवती छान्ने भन्ने केही टिप्सहरु दिन्छ ।
गुडम्यान प्रोजेक्टमा प्रकाशित केही यस्ता गुणको वर्णन गरिएको छ यदि यी गुणहरु तपाइको हुनेवाला जीवनसाथीसँग छैन भने विकल्प रोज्ने कि ? वा यो लेख पढ्न दिने पो हो कि ?
१. प्रशंसा नगर्ने स्वभाव : यदि तपाइ एक वफादार प्रेमी हुनुहुन्छ भने तपाइ सधैँ केही न केही आफ्नो मान्छेको लागि गरिरहनुभएको हुन्छ । त्यस्तै तपाइको आफ्नै उन्नति प्रगति, शिक्षामा सफलता आदि कुराले आउँदो सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यी केही पनि कुराहरुमा यदि उनले तपाइको प्रशंसा गर्दिनन् भने तपाइले अरु कोही भेट्नुहुनेछ जो तपाइको मेहनत प्रति कृतज्ञ होस् ।
२. गैरजिम्मेवार वा दोष थाेपर्ने : मानिसले गल्ती गर्नु स्वाभाविक हो । गल्तीलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु जीवनको हरेक पाटोमा बुद्धिमानी हुन जान्छ । तर यदि तपाइकी प्रेमिकाले आफ्नो गल्ती कैलै देख्दिनन् र अक्सर तपाइमाथि घटना परिघटनाको दोष देखाउन खोज्छिन् भने यसले ज्यादातर सम्बन्धमा खुशीयाली ल्याउने छैन, जानी राख्नुस् ।
३. अनावश्यक हक जमाउने : हरेक मानिसको व्यक्तिगत जीवन फरक फरक हुन सक्छ । त्यसैले तपाइको जीवनसाथीले यदि तपाइका अन्य साथीभाइसँग घुम्ने, रमाउने समयसँग रिसराग गर्ने, वा अनावश्यक हक जमाउने गर्छिन् भने यसले पनि द्धन्द्ध सृजना गर्छ ।
४. अनियमितता : यदि तपाइसँग उनी अनियमित छिन् भने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, यदि तपाइको फोन कल्स वा मेसेजहरुकाे ठीक ढंगले प्रतिउत्तर आउँदैन भने सम्झनुस् सायद उनीमा तपाइप्रतिको लगाव कम भएको छ । यदि यसो हो त कृपया खुशी खुशी आँफै टाढा रहनुस् । कहिल्यै पश्चाताप हुने छैन ।
५. अरुसँगको उनको व्यवहार : यदि तपाइको कोही आफन्त साथी वा क्याफेमा काम गर्ने मान्छे आदिसँग उनको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुराले पनि सम्बन्धमा ठूलो माने राख्दछ । यो दुवैको कुरामा लागू हुन्छ । मतलब मानवीय स्वभाव आवश्यक छ कुनै सम्बन्ध अघि बढाउन ।
६. सबैमा अधिकार जमाउनु : विशेष अवसर बाहेक अन्य बेलामा पनि केही वस्तु वा घुम्न जाने कुराको निम्ति कुनै पनि हालतमा उनलाई पहिलो प्राथामिकता दिनै पर्छ भने यो पनि सुखदायक लक्षण होइन । किनकी सम्बन्ध भनेको दुईवटा चालकले चलाएको एउटै गाडी हो । कहाँ सम्म लाने भन्ने निर्धारण नितान्त दुवैको आनीबानी र भावनाले गर्छ ।
७. नकारात्मक तार्किकता : तपाइ जति धेरै माया गर्नुस् । वा ख्याल गर्नुस् तर त्यो व्यक्तिले तपाइका हरेक प्रयासहरुलाई नकारात्मक ढंगले व्याख्या अपव्याख्या गर्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई तपाइको जीवनबाट सँधैका लागि टाढै राख्नुस् ।
८. भविष्यको साझा लक्ष्य धेरै फरक भए : दीर्घकालीन सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहँदा यदि दुवै जनामा कम्तिमा न्युनतम साझा लक्ष्य हुन आवश्यक छ । यदि तपाइ मेडिटेसन सेन्टर चलाउने योजनामा हुनुहुन्छ तर आफ्नो पार्टनरले चाँहि वियरको डिलर खोल्ने सोच बनाउँछ भने यसले सम्बन्धमा तित्तता जरुर पैदा गर्दछ । गम्भीर बन्नुस् किनकी जीवनका केही साधारण कुराहरु पनि मिल्न सकेन भने अलमल र दुःखदायी बन्नेछ । यदि यस्तो स्थिति छ भने यो जालोमा नफस्नुस् ।
जीवनको अन्त्य त्यतिखेर हुन्छ जब हामी रुपान्तरण वा परिवर्तन स्वीकार्दैनौँ । तर आफूले आफ्नो कमी कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सुधार्ने तर्फ ध्यान लगाएर जीवनको सुनौलो क्षितिज निर्माण गर्ने हामीसँग सँधै यो विकल्प बाँकि रहेको हुन्छ ।
सुन र हिराबाट बनेको ट्वाइलेट प्रर्दशनमा !
अण्डा बाजीले लियो ज्यान, ५० वटा अण्डामा ४२ वटा खाएपछि मृत्यु